RFID Crystal Epoxy Tag ကို Access Control Amber Tag, Crystal Epoxy Access Control Card, Crystal Epoxy Access Control Smart Card, Crystal Epoxy Identification Tag, crystal Epoxy NFC ကို Tag ကို, crystal Epoxy စမတ်သတ်မှတ်ခြင်း Tag ကို, RFID Amber Card, RFID Crystal Epoxy Keychain production
RF chip ကို: EM4102, TK4100, EM4305, MF 1k S50, MF 4K S70, Ultralight, T5557, NTAG203, ဂြိုလ်သား h3, etc.
ပရိုတိုကောနျ Standard: ISO ကို 11785, ISO ကို 11784, FDX-B က, ISO ကို 14443, ISO ကို 15693, ISO ကို 18000-6C / 6B
ပစ္စည်း: ကို ABS / PVC + Epoxy(ပျော့ / ခက်ခဲ)
RFID Crystal Epoxy Tags(Smart Amber Tag) products usingavariety of materials printed on the surface made of imported Crystal Epoxy. anti-မြေမှုန့်, ရေစိုခံ, အဘယ်သူမျှမပူဖောင်း. ပွင့်လင်းမြင်သာမှု, ထိုကဲ့သို့သောဖန်အဖြစ်. ကောင်းသောသုံးခုရှုထောင်အသိ, မည်သည့်ပုံစံများအတွက်စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါသည်. ဖောက်သည်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များကိုအဆိုအရကာတွန်းပုံစံမျိုးစုံအမျိုးမျိုးအောင်, တောက်ပသော, lifelike ပုံရိပ်, အားလုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပရိုမိုးရှင်းများအတွက်စံပြရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်.
အသုံးပြုခွင့်ကိုထိန်းချုပ်မယ်, အချိန်တက်ရောက်သူ, ဝင်ခွင့်လက်မှတ်, တစ်ခုကဒ်ဖြေရှင်းချက်, ဘတ်စ်ကားအသွားအလာကဒ်, trans ဆိုတဲ့ကဒ်, ကားတစ်စီးပန်းခြံတွေအများကြီး, လက်မှတ်တွေ, ထုတ်ကုန်ဖော်ထုတ်ခြင်း, ကျောင်းကစီမံခန့်ခွဲမှု, အသိုင်းအဝိုင်းန်ထမ်းများရဲ့အထောက်အထားစီမံခန့်ခွဲမှု, ကလပ်အဖွဲ့ဝင်စီမံခန့်ခွဲမှု, တစ်ဦးလက်မှုပညာလက်ဆောင်ကဒ်အဖြစ်ကိုလည်းတင်ပြနိုင်ပါတယ်.
I am interested in your product RFID Crystal Epoxy Access Control Card, crystal Epoxy စမတ်သတ်မှတ်ခြင်း Tag ကို
prev: RFID သတ္တုထုပ်ပိုးပြီး Crystal Epoxy Keychain ရှေ့ကနေ, သတ္တုထုပ်ပိုးပြီး Amber Tag ကိုရှေ့ကနေ
နောက်တစ်ခု: RFID Crystal Epoxy Card ကို, NFC ကို Crystal Epoxy Tag ကို